के तपाइँ बीटा ब्लकरहरू र व्यायाम लिन सक्नुहुन्छ? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार कम्पनी, चेकआउट कल्याण मनोरञ्जन औषधि जानकारी चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के तपाइँ बीटा ब्लकरहरू र व्यायाम लिन सक्नुहुन्छ?
उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप पनि भनिन्छ) साइलेन्ट किलर भनेर चिनिन्छ। यस अनुसार रोग नियन्त्रण र रोकथामको लागि संयुक्त राज्य केन्द्रहरू (CDC) , संयुक्त राज्य अमेरिका मा वयस्क को आधा को शर्त छ। अझै, धेरैलाई यसको बारेमा सचेत छैन किनकि कुनै हृदय लक्षणहरू वा स्ट्रोक नहोउन्जेल त्यहाँ कुनै लक्षणहरू देखा पर्दैन।
बीटा ब्लकरहरू , बिटा-एड्रेनर्जिक ब्लकि agents एजेन्ट पनि भनिन्छ, व्यापक रूपमा निर्धारित औषधीहरू कम गर्न उच्च रक्तचाप र हृदय रोग रोक्न। जबकि व्यायामले तपाईंको रक्तचाप कम गर्न सक्छ, अत्यधिक मात्रा खतरनाक हुन सक्छ। यो गाईडले उच्च रक्तचाप भएका मानिसहरूलाई बिटा ब्लकरहरू र व्यायाम सुरक्षित रूपमा कसरी मिलाउने भनेर जान्न मद्दत गर्दछ।
कवक लागि एप्पल साइडर सिरका मा खुट्टा भिज्नुहोस्
बीटा ब्लकरहरू कसरी काम गर्छन्?
बीटा ब्लकरहरूले हर्मोनस एपिनेफ्रिन (एड्रेनालाईन पनि भनिन्छ) र नोरिपाइनफ्रिनको प्रभावहरू रोक्दछन्। बीटा ब्लकरहरू मुटुको धडकन धीमा गर्दछन् र यसले कम बलको साथ कुट्छ, जुन रक्तचाप कम गर्दछ। यसले रगत र धमनीहरू खोल्न रगत प्रवाह बढाउन मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ बिटा ब्लकरका बिभिन्न प्रकार छन्; केहीले मुख्यतया मुटुलाई असर गर्दछन्, जबकि अरूले मुटु र रक्त वाहिका दुवैलाई असर गर्छन्। तपाइँ र तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सँगै तपाइँको सर्त को लागी सही बेटा ब्लकर छनौट गर्न को लागी काम गर्दछ। मौखिक बीटा ब्लकरको उदाहरण समावेश:
इन्द्राल, इनोप्रान एक्सएल (प्रोप्रानोलल)
लोप्रेसर, टोपोल एक्सएल (मेट्रोप्रोल)
मूत्रवर्धक (जस्तो कि उच्च रक्तचाप र हृदय रोगको उपचार गर्ने) जस्तो अन्य नुस्खाहरू अप्रभावी हुन्छन्, बीटा ब्लकरहरू सामान्यतया मानिसहरूका लागि पहिलो-लाइन उपचार हुँदैनन् मात्र उच्च रक्तचाप छ। Hईल्थकेयर प्रदायकहरूले यी औषधीहरू उच्च रक्तचाप रोक्न र यसको उपचारको लागि लेख्छन्:
अनियमित हृदय ताल (एरिथमिया)
छाती दुखाई (एनजाइना)
थरिका काँही प्रकारहरु
Bएटा ब्लकरहरू छाती दुख्ने, पसिना बग्ने, र काम्ने जस्ता लक्षणहरू कम गर्दछ, तिनीहरूलाई उच्च रक्तचापको लागि अन्य औषधीहरूको लागि अद्वितीय बनाउँदछ।
बीटा ब्लकरको साइड इफेक्ट
दुर्भाग्यवश, तिनीहरू कालो व्यक्ति र बुढो वयस्कहरूको लागि राम्रोसँग काम नगर्न सक्छन्, विशेष गरी जब अन्य रक्तचाप औषधि बिना। केहि बीटा ब्लकरहरू गम्भीर दमा भएका व्यक्तिहरूमा दमको हमला गर्न सक्छन् र मधुमेह भएकाहरूमा कम रगतमा चिनीका लक्षणहरू नकाब गर्न सक्छन्।
बीटा ब्लकरहरूको सामान्य साइड इफेक्टहरू:
केही व्यक्तिले कम कम कम साइड इफेक्टहरू पनि अनुभव गर्न सक्दछन्:
प्रायः स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले रक्तचाप कम गर्न एक वा बढी थप औषधिहरूको साथ बीटा ब्लकरहरू लेख्दछन्।
के बीटा ब्लकरहरूले व्यायामलाई असर गर्छन्?
बीटा ब्लकरहरू र व्यायाम दुबै कम गर्न सहयोगी हुन सक्छ रक्तचाप स्तर । यदि तपाईंसँग उच्च रक्तचाप छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले प्राकृतिक रूपमा यसलाई कम गर्न मद्दतको लागि एक तरिकाको रूपमा अधिक व्यायाम गर्न सुझाव दिन सक्छ। यदि तपाईले औषधि लिनु पर्छ भने के यो व्यायाम गर्न सुरक्षित छ? धेरै जसो बीटा ब्लकरले तपाईको रक्तचाप कम गर्दछ, र तपाईको मुटुको दर र हड्डीको गतिलाई कम गर्दछ (मुटुमा एक मिनेटमा कति रगत पम्प हुन्छ), त्यसले तपाईको व्यायाम लक्ष्यहरूलाई असर गर्न सक्छ।
चाहे व्यायाम सीमित गर्न प्रभाव पर्याप्त महत्वपूर्ण छ सामान्यतया बिरामी-विशिष्ट हो,जोआना लुइस, Pharm.D, को संस्थापक भन्छन् फार्मासिष्टहरूको गाईड । धेरै अध्ययनहरूले देखाए कि व्यक्तिहरू सामान्य जस्तो व्यायाम गर्न सक्दछन्, तर यो वास्तवमै व्यक्तिको एथलेटिक अवस्थामा निर्भर गर्दछ।
तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले व्यायाम तनाव परीक्षणको सिफारिश गर्न सक्छ, जसले व्यायामको दौरान मुटुको रगत प्रवाह जाँच गर्दछ र बीटा ब्लकरहरूमा मुटु कत्तिको कठोर पम्प गर्दछ भन्ने उपाय गर्दछ। त्यसपश्चात उनीहरूले तपाईको लक्षित मुटुको दर पत्ता लगाउन यो जानकारी प्रयोग गर्न सक्दछन्।
विज्ञहरू पनि सुझाव दिन्छन् बोर्ग स्केल (बोर्ग रेटिंग प्रेसिंग एक्सरन्शन, वा आरपीई) एक सरल तरिका को रूप मा कसैले कडी कसले व्यायाम गरिरहेको छ। मापनले कत्ति कडा परिश्रम गर्दछ जुन तपाईले काम गरिरहनु भएको छ (जुन धेरै धेरै, धेरै कडा होईन) six देखि २० सम्मका नम्बरहरूको साथ। धेरै संख्यामा, तपाई कडा परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए, कुनै मोलको दर अनुमानका लागि १० लाई गुणन गर्नुहोस्। व्यक्ति जो बीटा ब्लकरहरू लिन्छन् अनजान हुने जोखिमलाई चलाउँछन् जब उनीहरू अत्यन्त कडा व्यायाम गरिरहेका हुन्छन्; तिनीहरूले अधिक मात्रा रोक्न मा पैमाने को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया, यदि तपाईं एरोबिक व्यायाम गरिरहनु भएको छ भने, तपाईं कुरा गर्न सक्षम हुनुपर्दछ तर गाउनु हुँदैन। यदि तपाईं कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने, त्यसोभए तपाईं सायद अलि धेरै कडा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, जेस्यालेन एडम, एमडी भन्छन, एक खेल चिकित्सा चिकित्सक दया चिकित्सा केन्द्र । मेरो कामको रेखामा, सामान्यतया यो नै मानिसहरूलाई मेरो अफिसमा पुग्दछ - धेरै चाँडै गर्दै। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं ढिलो र स्थिर हुनुहुन्छ, बिस्तारै निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, र आफैंलाई कठोर पार्नुहुन्न।
यदि तपाई हल्का टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, छाती दुख्ने, थकान, वा सास फेर्न समस्या भएमा यसको मतलब मुटुको दर वा रक्तचापमा खस्कन सक्छ र तपाईले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई हेर्नु पर्ने हुन सक्छ। उनीहरूले फरक बिटा अवरोधक वा औषधि लेख्न सक्छन् जुन मुटुको दरमा कम प्रभाव पार्दछ।
बीटा ब्लकरहरू अन्य औषधिहरू र खुराकसँग अन्तरक्रिया गर्न पनि सक्छन्। रक्त वाहिकाहरू डाइलाइट गर्ने ड्रग्स, नाइट्रेट्स जस्ता, बीटा अवरोधक लिँदा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। र, यद्यपि पूरकहरू प्राकृतिकको रूपमा प्रमोट भएका छन्, उनीहरू अझै पनि जोखिम लिन सक्छन्।
हथर्न बीटा ब्लकरहरू लिदा बेवास्ता गर्नुपर्ने जडिबुटी हो, डा। लुइस भन्छन्। कुनै पनि पूरक तपाईको स्वास्थ्य पेशेवरले चलाउनु पर्छ किनकी तपाइँ आफ्नो हृदयको औषधिसँग कुनै अन्तरक्रिया चाहनुहुन्न।
बीटा ब्लकर पनि लिने मधुमेह भएका व्यक्तिहरू हाइपोग्लाइसीमिया लक्षणहरू वा रगतमा चिनी (ग्लूकोज) को स्तरमा डुबाउने शरीरको प्राथमिक उर्जा स्रोतमा कम संवेदनशील हुन सक्छ।
के म tylenol र advil सँगै लिन सक्छु
बीटा ब्लकरहरू लिँदा कसरी आकारमा रहन सकिन्छ
व्यक्ति जो बीटा ब्लकरहरू लिन्छन् तिनीहरू अझै पनि नियमित व्यायाम गर्न सक्छन् र बाहिर काम गर्दा हृदय लाभहरू देख्न सक्छन्। एक लक्ष्य मुटुको दरको लागि लक्ष्य गर्नेहरूले बिटा ब्लकरमा हुँदा उनीहरूको नयाँ लक्षित मुटुको दर फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा मनमा राख्नुपर्दछ। लुईस भन्छन् कार्डियोसेलेक्टिव बेटा ब्लकरहरू (जस्तैatenolol, bisoprolol, र metoprolol), जसले केवल हृदय कोशिकामा बीटा रिसेप्टर्स लाई ब्लक गर्दछ, गैर-कार्डियोसेलेक्टिव प्रकार भन्दा कम व्यायामलाई असर गर्न सक्दछ (जस्तै नाडोलोल, carvedilol, र propranolol)।
बिटा ब्लकरहरूले हृदय गतिलाई भ्रामक तल्लो स्तरमा सुस्त पार्ने भएकोले व्यायाम गर्दा ओभरएक्सर्सन बेवास्ता गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ कसरत कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि, पहिले तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईको चिकित्सकले तपाईको लक्षित मुटुको दर कस्तो हुनुपर्दछ र कस्टम व्यायाम योजना बनाउँदछ।
को रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC) सँग केही सामान्य व्यायाम सल्लाहहरू छन् जुन केही समयमा सक्रिय भएनन्:
सक्रिय हुने तरिकाहरू खोज्नुहोस्। टिभी हेर्नुको सट्टा बेलुकाको खाना पछि हिड्नुहोस्।
एक तालिका सिर्जना गर्नुहोस्। शारीरिक गतिविधिको लागि प्रत्येक दिन समय छुट्याउनुहोस्।
तपाईलाई मन पर्ने केहि गर्नुहोस्। शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने धेरै तरिकाहरू छन् - हिंड्ने, साइकल चलाउने, व्यायाम वर्ग। तपाइँ एक गतिविधिमा फेला पार्नु भएको समयमा तपाइँसँग रहनु हुने सम्भावना बढी हुन्छ तपाईको उत्तम शर्त हो कि त्यो बिहान वा काम पछि पहिलो चीज हो।
पार्टनर अप। एक अर्कालाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न साथीहरू वा परिवारका सदस्यहरूसँग काम गर्नुहोस्।
बिस्तारै सुरू गर्नुहोस्। तपाइँलाई पूर्ण गतिमा नयाँ व्यायाम योजनामा ​​डुब्नको लागि लोभ्याउन सक्छ, तर यो बिस्तारै सुरू गर्न र अधिक कठोर गतिविधिहरूमा निर्माण गर्न उत्तम हो। CDC ले एक हप्ता १ activity० मिनेटको शारीरिक गतिविधि सिफारिस गर्दछ; दिनको २ 25 मिनेटमा समय तोड्नुहोस्।
र यदि तपाईं आफ्नो रक्तचाप जाँचमा राख्न मद्दतको लागि व्यायाम गर्दै हुनुहुन्छ भने, दिमागमा राख्नुहोस् (प्लस औषधि) केवल दुई रणनीतिहरू मात्र काम गर्दछन्। विज्ञहरू कम-सोडियम आहार खाने, रक्सीको मात्रा सीमित गर्ने, तनावको स्तर कम गर्ने र धुम्रपान छोड्ने सल्लाह दिन्छन्।
मेडिकेयर बनाम मेडिकेड: के भिन्नताहरू छन्?
एक गर्भवती महिला मतली र उल्टी को लागी के लिन सक्नुहुन्छ
कसरी खमीर संक्रमण पछि छाला निको पार्ने
tylenol मा दुखाई कम गर्ने के हो
4 वर्ष को लागी सबै भन्दा राम्रो एलर्जी औषधि
braggs स्याउ साइडर सिरका र रक्तचाप
कति दिन पछि योजना बी प्रभावी छ